Dowlada Soomaaliya oo looga digay maamul u sameynta Hiiraan |
Dowlada Soomaaliya oo looga digay maamul u sameynta Hiiraan
Maxamed Muxumed Siyaad (Daad) oo ka mid ah Aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa uga digay Dawladda Federaalka Soomaaliya in ay Maamul Goboleed aysan kala tashan dadka u dhashay Gobolkaasi ay halkaasai ka dhisto.
Maxamed oo ka mid qurba joogta ku nool Magaalada Mamlö ee Dalka Swedan ayaa sheegay in ay jiraan tuhuno badan oo ku aadan in Dawladdu qorshaynayso inay dhisto Maamul Goboleed aysan kala tashan Dadka Deegaanka, wuxuuna intaa ku daray in ay jiraan shirar gooni gooni ah oo ay yeesheen dadka Gobolka Hiiraan ee ku nool Dalka iyo Dibada ayna qaateen mowqif isku mid ah oo ku aadan Dhismaha Maamul Goboleedka, isagoo ugu Baaqay dawladda Federaalka inay qaadato Go’aanada ay gaareen Dadka Gobolka.
Maxamed Daad oo u waramayey Warbaahinta ayaa sheegay inay ay raali ku yihiin haddii ay Dawladdu kala tashato dhismaha Maamul Goboleedka Dadka u dhashay Gobolka Hiiraan, isagoo raaciyey inay soo dhawaynayaan in la wada tashado. Wuxuuna uga digay Dawladda Federaalka inay ku dhaqaaqdo talaabo aysan raali ka ahayn Dadka Gobolka Hiiraan oo loogu dhiso Maamul, wuxuuna tilmaamay in dhibaatadii ka dhalata arintaasi ay Masuuliyadeeda qaadanayso dawlada Federaalka Soomaaliya.
Maxamed wuxuu ugu dambayntii sheegay in Dawladda Federaalka Gobolo ay u dhistay maamul Goboleedyo uu dhaliyey Muran iyo is jiid jiid aan weli xal loo helin, iyaguna ay arintaasi ka digtoon yihiin, hasa yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo habka ay dadka Gobolka u dhashay ay doonayaan in loo dhiso Maamul Gobeleedka